လွှတ်တော်ထဲက ပွတ်တိုက်မှုတွေနဲ့ သီတင်းပတ် - BBC News မြန်မာ
လွှတ်တော်ထဲက ပွတ်တိုက်မှုတွေနဲ့ သီတင်းပတ် - BBC News မြန်မာ 5
ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြား ကျင်းပခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ပွတ်တိုက်မှုတွေလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ လွှတ်တော်သတင်း တချို့ ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ကို တာဝန်က ရုပ်သိမ်းဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အရေးကြီးအဆို ဦးဆောင်တင်သွင်းခဲ့တာနဲ့ တပ်မတော်က တင်ပြတောင်းခံလာတဲ့ ဖြည့်စွက်ဘတ်ဂျတ်ထဲကနေ ကျပ်ဆယ်ဘီလီယံကျော်ကို လွှတ်တော်က ဖြတ်တောက်လျှော့ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနှစ်ရပ်လုံးဟာ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်း ဆယ်နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ဖြစ်စဉ်တွေလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီထူးခြားဖြစ်စဉ်သတင်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးထားတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူ တစ်ပတ်အတွင်းသတင်းကောက်နုတ်ချက်ကို အောက်ပါရုပ်သံမှာ ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #လွှတ်တော် #နေပြည်တော် #မြန်မာ #ကြံ့ခိုင်ရေး #အန်အယ်ဒီ #စစ်တပ် #တပ်မတော် #ဦးတီခွန်မြတ်
စစ်ခွေးနဲ့ ဖွတ်ခွေး လွှ‌တ်တော်ထဲ မရှိရင် တိုင်းပြည် တိုးတက်ပီး...ဘာအကျိုးမှ မရှိ နေရာလုဖို့ဘဲ ချောင်းနေတယ်...လစာ နှမျောစရာ...😃
We stand with U T.Khun Myat, God be with you.
Author — Monica pit
ခင်ဗျားတို့ဖွတ်ပါတီလက်ထက် နှစ်၆၀ လောက် နုတ်ပိတ်နေခဲ့တာ ဘယ်သွားသေနေလဲး ခုမှထဟောင်လည်း
Author — hlaing Myamnar
ထပ်ထပ်ဘောင်မချဲ့ပဲ အမြန်ဆုံး နှစ်ဉီးနှစ်ဖက် ညှိုနှုင်းဆွေးနွေး ပြီး အဖြေရှာရင် တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတွေရပြီး နောက်ဆိုရင် စစ်တိုက်ဖို့တောင်ရှိတော့မှာ
Author — Yangkhomang Haokip Kuki
ကိုယ်တွေလည်း ဦးတီခွန်မြတ် ဖက်ကထောက်ခံပါတယ်
Author — Khin Saw Win
Author — Thura Kyaw
NLD should kick out Tatmadaw's 25% representatives from Lutdaw. Nobody elected them.
Author — Mali Seng Ja Bum
Need to get rid of entirely!😊😊😊
Author — Bindu Rai
It good to cut down more Military army funds. ..
Author — win mwin htoo
ေလးစားပါတယ္ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုိဆုိဒါ ျပည္သူေတြက
Author — ลูก ค้า
နိုင်ငံကောင်းဖို့ လုပ်သင့်တာလုပ်တဲ့ သူရဲကောင်းမျယးများပေါ်ပါစေ ပြည်တွင်းစစ်ကိုမလိုချင်ဘူး ယုတ်မာတဲ့တပ်မတော်ကို စစ်ဆေးစေချင်တယ်
ျဖဳတ္ခ် တယ္ဆိုတာ ျဖဳတ္ၿပီး ဘာကိုခ်ဖို႔လဲ ဖင္ခ်ဖို႔လား
Author — Kyaw Lin
ေကာင္းတယ္ ႀကိပ္တယ္ ဟား လြတ္ေတာမွာ တီလိုႏြားေတြကို လြတ္ေတာ္မွာ မွာမထားတာေကာင္းတယ္
Author — Aung Lay
Author — Soe Myanmar
ျပည္သူဘာမွမေျပာတာၾကေတာ့ တင္သြင္းတယ္ ေခ်းရႉေနတဲ့ ဖြတ္ေတြ
Author — Bo Burma
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖို ရွိလားကြားးးးးးးးး စိတ္ညစ္လိုက္တာ
Author — लछुमन रावू दास
ဘတ်ကျပ်ဘယ်လောက်ရရ အသုံးကျအောင် စွမ်းဆောင်ပြပါ
Author — nainghtoo aung
AA ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္